Burma oo miinooyinka dhulka ugu aasey qaxootiga Rohinga |
Burma oo miinooyinka dhulka ugu aasey qaxootiga Rohinga
Burma (estvlive) 06/09/2017
Maalmihii u danbeeyey ciidamada dalka Burma waxay bilaabeen in ay miinooyin ku aasaan xuduudka kala qaybiya Burma iyo Bangladesh. Ujeedada miinooyinka dhulka loogu aasay ayaa ah in la yareeyo in qaxootiga Rohinga dib ugu soo noqdaan guryihii ay ka qaxeen ee dalka Burma.
Xukuumadda dalka Bangladesh war ay siisey Reuters ayaa ku sheegtey in miinada dhulka laga buuxiyey xuduudka kala qaybiya iyaga iyo Burma, saddexdii maalmood ee u danbeysey.
Wakaalada wararka ee Reuters ayaa aragtey sawiro muujinaya dad waxyeelo ay ka soo gaartey miinooyin dhulka loogu aasay oo la qarxay, dadka ay aragtey Reuters waxaa kamid ahaa wiil ku waayey qarax miino mid kamid ah lugihiisa, maalintii shalay ee Salaasada.
Reuters oo soo xiganaya qaar kamid ah xukuumadda Bangladesh oo aan magacooda sheegin ayaa sheegtay in ciidamada Burma ay miinooyin dhulka ku aaseen si ay u yareeyaan in qaxootiga Muslimiinta ee Rohinga ay dib ugu laabtaan guryahoodi gobolka Rakhine ee galbeedka Burma.
Qiyaastii 120 000 oo qof oo ahaa Muslimiinta laga tirada badan yahay ee deganaa gobolka Rakhine dalka Burma ayaa u baxsadey dalka Bangladesh tan iyo 25 Agoosto, kadib markii ciidamada dalkaasi bilaabeen in ay guryahaoodana gubaan dadka rayidka ahna rasaas la dhacaan, iyaga oo sabab uga dhiganaya in Jamhadda Arakan Rohingya Salvation Army ay sheegeen in ay weerar ku qaadey saldhig Boolis.
Muddo dheer waxaa ka socdey dalka Burma ee ay ku badan yihiin dadka Buddhistaha ah, xasuuq iyo tirtirid dadka Rohinga ee Muslimiinta ah kuwaas oo deggan Koonfur Galbeed Burma, waxaana tiradooda lagu qiyaasaa 1.1 Milyan oo qof.